TUSOOYOOYINKA: 25 CUSUB YIHIIN KA HELI KARO KAADI HADDII HADDII AAD U BAAHANTO
ACCUEIL » VIDEOS »TUSOOYOOYINKA: XADIISKA 25 KA HELI KARAA KAADI HADDII HADDII AADANAYO
TUSOOYOOYINKA: 25 CUSUB YIHIIN KA HELI KARAA KAADI HADDII HADDII AADANAYO
Gabdhaha, waad jeclaan doontaa ururinta aruurinta ee talooyinka quruxda badan iyo farsamooyinka! Waxaad baran doontaa sida loo kabo dhibcaha ugu dambeeyey ee kareemka iyo aasaaska oo aad ka cabanayso mugga aad sida caadiga ah tuurto. Waa hab fiican oo lagu badbaadinayo miisaaniyaddaada. Waxaan jecel nahay dhaqdhaqaaqa badbaadiya lacag sababtoo ah waxaad ku qarashgareyn kartaa lacag dheeraad ah oo ku saabsan madadaalada ama qalabyada.
Fiiri arinkan cajiibka ah ee raqiisyada qurxinta raqiiska ah:
- Ha tuurin tuubbooyinka qurxinta ee fiiqan. Qaado dhibcaha ugu dambeeyey ee kareemka adiga oo jaraya tuubada. Isticmaal daawada dabka ama cawska si aad u soo kabato. Waa hab fiican oo loo kordhiyo nolosha qurxintaada.
- Guud ahaan, waxaad ku xannibeysaa 20% aasaaska sababtoo ah ma heli kartid dhalo. Isticmaal caws la cabbo si aad u cabto dhibcooyinka ugu dambeeya
- Haddii aad jeceshahay saamaynta maskaxda ku jirta dibnahaaga laakiin ma haysatid lipstick matte hadda, waxaan ognahay sida loo xalliyo dhibaatadan! Ku rid lakabka lakabka oo ku rid bushqada bushimahaaga. Isticmaal budada iyo buraashka samaynta si aad uhesho saameynta sawirka. Waxaa intaa dheer, lipstick-kaaga ayaa sii dheeraan doona
- Gabar kasta way ogyihiin dhibaatada dhibta leh markaad rabto in aad haysato nasiib wacan, laakiin runway waa meel kasta. Waxan haysanaa wax xajinaya timaha tufaaxan iyo cadayashada caday. Duufka ku shub hal mar ama laba jeer cadayga oo si taxadar leh u cadayo marinada hawada si aad isugu qorto timahaaga intiisa kale.
- Kala saarista qurxinta ayaa ah hab weyn oo loogu talagalay qurxinta oo qumman oo degdeg ah. Qaado weel biyo ah oo ka saar qaybta dhexe ee sarreeyaha hore. Ku rid biyaha ilaa ay ka baxdo midabka. Ka dib markaa, rinjiga qaybta muhiimka ah ee ka saarista qurxinta. Qaybta ugu muhiimsan dib ugu soo celi cirbadeeye oo isticmaal.
- Haddii aad timo jilicsan, adeegso wareegga nolosha ee soo socda si aad u xoojiso iyaga oo aan waxyeello u geysan - Isticmaal thermoreceptor oo isticmaal bir birta ah laakiin ka hor intaadan isticmaalin, ku duub aluminikiyamka
- waxaad ka dhigi kartaa mascada guriga ka samaysashada hooskii hore ee isha iyo batroolka
- Isticmaal PVA sida jaakad salka ah si aad si dhaqso ah uga saarto xoqida dhalada
02: 13 Trick
02: 53 Hel dhibic kasta oo kareemkaaga ah
05: 08 Quick Loops
05: 29 Remover Remover
06: 47 Farxad Faransiis DIY ah
13: 59 khadka telefoonka
Tani waxay u muuqatay mid hore https://www.youtube.com/watch?v=IPPYI64aHno
Xadiiqada 8 ee kudhowaad - Tani waa fiidiyowga